Maqaayad balan qaaday inay bilaash dadka ku siinayso cuntada uu ugu jecelyahay Mohamed Salah mar walba oo uu gool dhaliyo – Gool FM
Maqaayad balan qaaday inay bilaash dadka ku siinayso cuntada uu ugu jecelyahay Mohamed Salah mar walba oo uu gool dhaliyo
Liibaan Fantastic March 1, 2018
(Liverpool) 01 Maarso 2018 Maqaayad ku taala magaalada Liverpool ayaa u soo bandhigtay dad waynaha ku nool magaaladaas inay bilaash ku cuni doonaan cuntada uu ugu jecelyahay Mohamed Salah marwalba oo uu gool dhaliyo.
Maqaayadaan waxaa iska leh ragg ay isku dal ka soo jeedaan Mohamed Salah, xiddiga reer Masar ayaana marwalba ka cunteeya sida ay sheegeen.
Waxay balan qaadeen in gool walba oo uu dhaliyo Salah in dadku ay si bilaash ah ku cuni doonaan cunatada uu ugu jecelyahay Salah oo loo yaqaano (Falaafil Al-Ximis) waxayna u qaab egtahay Bajiiyada iyo kabaabka.
“Falaafil Al-Ximis waa cuntada uu ugu jecelyahay Mohamed Salah, waa cunto Masaaridu ay caan ku tahay, waana mid waafaqsan caafimaadka” ayuu yiri maamulka maqaayada.
“Laga bilaabo haatan ilaa dhamaadka xiliciyaareedka si bilaash ah ayaan ku siinaynaa macaamiisha mar walba oo uu gool dhaliyo Mohamed Salah”.
Real Madrid oo helaysa war wanaagsan ka hor kulanka PSG
SAWIRRO: Man City oo soo gaartay London laakiin weli lama xaqiijin karo in kulanka la ciyaarayo